I-Ajkoski Apartments - Amagumbi Amabini aneLake View - I-Airbnb
I-Ajkoski Apartments - Amagumbi Amabini aneLake View
Pescani, Municipality of Ohrid, UMntla Makedoni
Iflethi okanye indlu ekwicomplex engaselwandle ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex, ekwicomplex, ekwi Iflethi inomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, i-WiFi yasimahla, umatshini wokomisa iinwele, ifriji, iTV enezikrini eziyisicaba, ibhalkhoni evulekileyo, igadi nendawo yokupaka esimahla.
I-Ajkoski Apartments ikwidolophana yasePeshtani, ikufutshane neOhrid Lake! Isakhiwo sikwindawo ethe cwaka nenobubele, ekumgama onokuhanjwa ngeenyawo ukusuka kwiimarike kunye neevenkile zokutyela. Kukho igadi entle ngaphambili kwindawo yokungena endlwini, apho unokupaka khona imoto yakho. Kwiindwendwe ezihamba ngaphandle kwezithuthi zazo, iBhasi Yokumisa Ibhasi Yasekuhlaleni ukuya esixekweni ikumgama wemizuzu eyi-1 xa zihamba ngeenyawo. Isixeko saseOhrid sikumgama weekhilomitha eziyi-12 kuphela ukusuka kumzantsi, kwaye kudla ngokuthatha imizuzu eyi-20, ngezithuthi zikawonke-wonke ukuya kuso. Amagumbi asendlini aneeTV, izinto zokuthambisa eziyimfuneko kunye noomatshini bokomisa iinwele kunye neefriji zabo. Onke amagumbi anegumbi lokuhlambela kunye nebhalkhoni enembonakalo Yechibi. Ukuba ufuna iholide esemgangathweni, ejikelezwe yindalo entle nenkcubeko enomtsalane, Le yindawo omele ube kuyo! Ubutofotofo bakho buqinisekisiwe ngamagumbi avulekileyo kunye nokubona ukuphefumla, ngokukodwa ngexesha lokutshona kwelanga.
IPeshtani yidolophana encinci, yokuloba ekumgama weekhilomitha eziyi-12 ukusuka kumzantsi wedolophu yaseOhrid. Yidolophu esecaleni kolwandle ethandwayo ecaleni kweLake Ohrid kwaye ilele ezantsi kweččica National Park. Le dolophana, eyayikade ikwindawo yokuloba, ngoku ifumana ingeniso eninzi evela kwezokhenketho kwaye ityelelwa ngabakhenkethi abaninzi ehlabathini lonke ngexesha lasehlotyeni. Iibhasi zasekuhlaleni zibaleka yonke imihla isiqingatha seyure ngalo lonke ixesha lonyaka, ngoko ukuhamba-hamba apha kulula. Ngokuqhelekileyo, akukho zinto zihambayo ngaphandle kweentsuku ezixakekileyo, xa kunokubakho abantu abaninzi kunesiqhelo, kodwa akukho nto iyoyikisayo! Kukho iivenkile zokutyela ezintandathu kwidolophana yasePeshtani apho unokuva khona ukutya okumnandi kwasekuhlaleni nokwesintu. Ungafumana neendawo ezithengisa inyama eyojiweyo nesanti apha! Iimarike zinento yonke osenokuyifuna, ukususela ekutyeni ukuya kutsho kwiimpahla nazo zonke iintlobo zezinto. Kukho iindawo ezintle eziselunxwemeni kwiGradishte ngexesha lonyaka kwabo bafuna ukonwaba baze bayidanise! IMonestry of St. Naum kunye neThe Bay Of the Bones Museum are a Must Visit!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pescani